Wax badan ka ogow Doontii maanta dabka ku qabsaday Dekadda Boosaaso & Ganacsato ku Hanti beeshay | Wax badan ka ogow Doontii maanta dabka ku qabsaday Dekadda Boosaaso & Ganacsato ku Hanti beeshay | Hal Sheegaha La Hubo
Wax badan ka ogow Doontii maanta dabka ku qabsaday Dekadda Boosaaso & Ganacsato ku Hanti beeshay
Doon u rarnayd ganacsato Soomaaliyeed ayuu barqanimadii Maanta Dab ku qabsaday meel ku dhow Dekadda Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari.
Doonidan oo lagu Magacaabi jiray Nuur Saabir, ayaa la sheegayaa inay gebi ahaanba ku bas beeshay halkaa, iyadoo ay guul darraysteen dedaallo lagu doonayay in lagu damisyo Doonida.
Doonidan oo sidday Shidaal, Bagaash iyo Gaadiid ayaa kasoo shiraacatay Xeebaha Dalka Isu tagga Imaataadka Carabta, waxaanay ganacsatada Boosaaso qaarkood oo la hadlay warbaahinta sheegeen inay xilligaasi isu diraayinayeen dejinta rarka saarnaa Doonidan.
Dhowr goor oo hore ayay sidan oo kale Doonyo Alaabo kala duwan u siday Ganacsato Soomaaliyeed uu Dab ku qabsaday agagaarka Dekedda Magaalada Boosaaso.
Wax badan ka ogow Liiska Xildhibaano kalsoonida kala noqda Jawaari oo la diyaariyay
R/Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa bilaabay inuu kullamo gaar gaar ah la qaato Xildhibaanada Golaha Shacabka kuwa Aqalka sare,kaasi oo ku aadan sidii loo sii adkeyn lahaa mooshinka laga gudbiyay Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya.
Wararka laga helayo Xafiiska R/Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegaya in laga dareemayo mashquul xad dhaaf ah,waxaana wararka qaar ay sheegayaan in howlaha Xafiiska ay joogsadeen,islamarkaana ay socdaan sidii looga wada qeyb qaadan lahaa ololaha mooshinka ka dhanka ah Guddoomiye Jawaari.
Maalin kasta Xafiiska Ra’iisal wasaaraha waxaa lagu arkaa Xildhibaano cusub oo iyagoo qoslaya ka soo baxaya,waxayna rajo wanaagsan ka qabaan mooshinka iyo meel maritiisa,” ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha howlwadeenada Xafiiska Ra’iisal wasaaraha oo magaciisa qariyay Xaalad amni darteed.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa xalay kullan la qaatay Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari,kaasi oo uu kala hadlay qaboojinta Xiisada siyaasadeed ee hadda soo cusboonaatay iyo in salka loo dhigo mooshinka wareegayo.
Madaxweyne Farmaajo iyo guddoomiye Jawaari ayaa ka wada hadleen khilaafka hareeyay Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, si xal looga gaaro arrimahaasi.
Wararka qaar ayaa sheegaya in guddoomiyaha Baarlamaanka uu dalbaday in Mooshinka la keeno Golaha Shacabka, Codna loo qaado muddo 10 maalmood gudahood.
Guddoomiye Jawaari ayaa sidoo kale xusay in loo baahan yahay in kulankaasi ay ka soo qeyb galaan Culumada Soomaaliyeed, Ururada Bulshada Rayidka iyo xubno ka socda Beesha Caalamka, si ay kor joogto uga noqdaan kulanka.